Malunga nathi - Weifang toption Chemical Industry Co., Ltd.
I-Weifang Toption Chemical Industry Co., Ltd.
Silala kummandla wophuhliso lwezoqoqosho eBinhai, eyona ndawo isisiseko semveliso yamachiza aselwandle e-China, enje ngetyuwa yolwandle, i-Soda Ash, i-Bromine. Izibonelelo eziluncedo zasekhaya ziqinisekisa umgangatho weemveliso zethu kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa. Ukuze iimveliso zethu zibe namandla kakhulu kukhuphiswano kwihlabathi. Okwangoku, amandla e-Sdoium Metabisulphite afikelele kwi-150000 yeetoni, ngokucoceka okuphezulu kwe-97% min. ICalcium Chloride ine-200000 yemveliso yonyaka, kunye nokungcola okungaphantsi kunye nesisombululo esicacileyo. Njengoko ISO9001, KOSHER kunye HALAL lweshishini evunyiweyo, iimveliso zethu zingasetyenziswa kushishino ukutya ngokukhuselekileyo.
I-Toptionchem ikwakhethekileyo kwimichiza yokomba, enje ngeCalcium Bromide, iSodium Bromide, iGel Breaker, njl. Phakathi kwezo mveliso, i-Encapsulated Gel Breaker ine-4000MT yonyaka enetekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi. Isetyenziswa ngokubanzi kumhlaba we-petroleum hydraulic fracturing field ukuya kwi-viscosity ye-Guar Gum. Izixhobo zovavanyo elebhu ngokugqibeleleyo, ezifana uGrace M5600, qinisekisa ulawulo lomgangatho elungileyo.Can wenze Gel Breaker ngokweemfuno zabathengi kwiqondo lobushushu kunye nexesha ukwaphuka.
I-Toptionchem izibophelele kukhuseleko lokusingqongileyo, izama ukuphuhlisa umjikelo kunye noqoqosho olutsha lwamandla, ukufumana uphuhliso oluzinzileyo. Sebenzisa amandla obushushu akhutshwe ngexesha lenkqubo yokuvelisa iSodium Metabisulphite ukuvelisa iCalcium Chloride neMagnesium Chloride, thatha iCarbon Dioxide ekhutshiweyo ukuvelisa iSodium Bicarbonate.
Usinde ngomgangatho kwaye uphuhliswe ngeCredit ", ukufuna iinjongo zeshishini zezona mveliso zintle, eyona ndleko isebenzayo, eyona nkonzo intle kunye nolwaneliseko.
Emva kweminyaka eli-15 yophuhliso, inkampani ifumene i-ISO: 9001 yeSatifikethi seMigangatho yeNkqubo, isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo loMgangatho. Kwangelo xesha, iimveliso zethu zifumene izatifikethi zeKosher kunye neHalal zokuhlangabezana neemfuno zabathengi baphesheya abaneenkolelo ezahlukeneyo zonqulo. Ukuzibophelela kuphuhliso lwembono yoqoqosho lokusingqongileyo, inkqubo yokuvelisa ayinangcoliseko, kwaye yamkelwe ngurhulumente wengingqi.
Iimveliso zithunyelwa kuMzantsi-mpuma weAsia, iYurophu neMelika, uMbindi kunye noMzantsi Melika, iAfrika ngaphezu kwamazwe angama-20 kunye nemimandla.
IHydrosulfite, Isisombululo seCalcium Bromide, Calcium Bromide Anhydrous, Ulwelo lweCalcium Bromide, Natrium Hydrosulfite, IHydrosulfite De Sodium,